एकाबिहानै भया’नक दु’र्घटना, यसरी कलंकीमा दुई वटा ट्र’क ठो’क्कि’यो, ३ जनाको मृ’त्यु | Public 24Khabar
Home News एकाबिहानै भया’नक दु’र्घटना, यसरी कलंकीमा दुई वटा ट्र’क ठो’क्कि’यो, ३ जनाको मृ’त्यु
एकाबिहानै भया’नक दु’र्घटना, यसरी कलंकीमा दुई वटा ट्र’क ठो’क्कि’यो, ३ जनाको मृ’त्यु
कपाल झ’र्ने स’मस्याबाट धेरै मानिस चि’न्तित हुने गरेका छन् । व्यक्तिको वास्तविक ‘लुक’ देखाउन कपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हेयर स्टाइल मात्र बदलियो भने पनि व्यक्तिको सुन्दरतामा निकै अन्तर आउँछ । कपालले अनुहारको वास्तविक ‘सेप’ र सुन्दरता देखाउन मद्दत गर्छ ।कपाल झ’रेर तालु खुइलिनु कुनै जटिल रो’ग होइन । तर, पनि कपाल मानिसको सौन्दर्यसँग जोडिने भएकाले तालु खु’इलिएकाहरू पुनः कपाल प्राप्तिका लागि विभिन्न उपाय गरिरहेका हुन्छन् । कपाल विभिन्न कारणले झ’र्छ ।
वं’शानुगत कारणका साथै था’इराइड, क्या’न्सर, डा’इटिङ, त’नाव आदिका कारण पनि कपाल झ’र्छ ।हा’र्मोनको कारणले पनि कपाल झ’र्छ । कपाल झ’र्नुलाई मेडिकल भाषामा ‘ए’न्ड्रोजेनेटिक ए’लोपेसिया’ भनिन्छ । हाम्रो टाउकोमा हुने कपाल दुई प्रकारका हुन्छन्, ए’न्ड्रोजेन से’न्सेटिभ र ए’न्ड्रोजेन इ’न्सेन्सेटिभ । ए’न्ड्रोजेन से’न्सेटिभ भनेको टाउकाको अगाडिपट्टिको भागमा हुन्छ ।यो भएको स्थानमा कपाल धेरै झ’र्छ । त्यसैले अधिकांश मानिसको नि’धारपट्टिबाट कपाल झ’र्दै जान्छ र तालु देखिने अवस्था आउँछ ।
पुरुषहरूको कपाल झर्न थालेपछि विद्वान भएछ वा धेरै पढ्न थालेछ भनेर साथीभाइका बीचमा हँ’सीमजाक गर्ने गरिन्छ ।तर, कपाल झ’र्नु न विद्वान भएको लक्षण हो, न धेरै पढेर कपाल झ’र्ने हो । शरीरमा हुने हा’र्मोनको गडबडी र वं’शानुगत कारण तथा कपालमा बढी के’मिकल मि’साइएका स्याम्पू र साबुनको प्रयोगले कपाल झ’र्ने गर्छ । वं’शानुगत कारणले कपाल झ’र्नुलाई ‘ए’न्ड्रोजेनेटिक ए’लोपेसिया’ भनिन्छ ।परिवारमा बुबा वा हजुरबुबाको कपाल कम उमेरमा झरेको छ भने त्यसको वं’शानुगत असर छो’रानातिमा पर्छ । यसको मुख्य कारण ‘डा’इहाइड्रो टे’स्टोस्टेरोन’ भन्ने हा’र्मोन हो ।
यसका कारण कपालको ज’रा सु’केर जान्छ । यो प्रकारको वं’शानुगत रो’ग हो ।यसको मेडिकल उपचारको साथसाथै अहिले विश्वमा कपाल प्र’त्यारोपण एक प्र’भावकारी उपायका रूपमा अ’पनाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि प्र’भावकारी कपाल प्र’त्यारोपण सेवा उपलब्ध छ । मैले सन् २०११ मा दक्षिण कोरियामा गएर हे’यर ट्रा’न्सप्लान्टका विज्ञ डा. जङ चुल किमसँग कपाल प्र’त्यारोपणसम्बन्धी तीन महिनाको ता’लिम लिएर आएपछि कपाल प्र’त्यारोपण गर्न थालेको हुँ ।‘न’न–ए’न्ड्रोजेनेटिक ए’लोपेसिया’ चाहिँ ह’र्मोनको कारणले हुने स’मस्या होइन ।
मानिसको जीवनशैली र कपाल नु’हाउँदा प्रयोग गरिने स्या’म्पूमा हुने केमिकलको मात्राका कारण पनि धेरैको कपाल झ’र्ने गरेको पाइन्छ ।धेरै नै कपाल झर्‍यो भने चिकित्सको सल्लाहमा ‘मि’नक्ससिडिल’ औ’षधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बढी समय हे’लमेट लगाउनेको कपाल झ’र्नसक्छ ।कपालमा चाया परेको छ भने पनि कपाल झ’र्ने हुन्छ । कपाल झ’र्नबाट जोगाउन आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ ।प्रयोग गर्ने स्याम्पूमा के’मिकलको मात्रा कति छ, त्यो हे’र्ने गर्नुपर्छ । जथाभावी हेयर क’लर गर्नु हुँदैन ।कपालको स्टाइल चेन्ज गर्ने भन्दै कपाललाई हानि पुर्‍याउने काम गर्नु हुँदैन ।डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठ, छाला, यौ’न रो’ग वि’शेषज्ञ तथा हेयर ट्रा’न्सप्लान्ट स’र्जन
Previous articleबुटवल नजिकै यस्तो भयो । अच्च* मको मान्छे पैसाको लागि यसरी गरिन बिहेको ना’ टक । (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
Next articleमलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युव’तीको नि,र्मम ह, त्या